Best Truss Manipulator Manufacturer and Factory |Tongli
Ny manipulator truss mandeha ho azy tanteraka dia fitambaran'ny fitaovana manipulator, truss, fitaovana elektrika ary rafitra fanaraha-maso mandeha ho azy.
Miorina amin'ny zoro havanana X, Y, Z telo-mandrindra rafitra, ny truss manipulator dia mandeha ho azy fitaovana indostrialy hanitsy ny toeram-piasana ny workpiece na mamindra ny workpiece.Afaka manatsara be ny fahombiazan'ny stacking sy ny fahamarinan-toerana, mampihena ny vidin'ny asa ary mahatsapa unmanned atrikasa famokarana amin'ny alalan'ny fampiharana ny truss manipulator ny stacking toby eo amin'ny faran'ny famokarana andalana.
Ny manipulator truss dia mampiasa teknolojia fanodinana mitambatra, izay mety amin'ny fandefasana sy fandefasana ny fitaovana milina sy ny tsipika famokarana, ny fihodinan'ny workpiece, ny fihodinan'ny workpiece, sns. Amin'izay fotoana izay ihany, ny rafitra fitaovana fametahana sy fametrahana azy dia manome interface tsara ho an'ny robot. fanodinana mandeha ho azy, ary ny famerenan'ny famerenan'ny toerana dia miantoka ny fahamendrehana avo lenta, ny fahombiazany sy ny tsy fitoviana amin'ny vokatra batch.
Ny manipulator truss dia milina afaka mametraka ho azy ny fitaovana izay ampidirina ao anaty fitoeran-javatra (toy ny baoritra, kitapo tenona, siny, sns.)Raisiny tsirairay araka ny filaharany ireo entana ary alahatra eo amin'ny pallet.Ao anatin'izany dingana izany, ny entana dia azo apetraka amin'ny sosona maromaro ary avoaka, ho mora ny mandeha amin'ny dingana manaraka amin'ny fonosana ary alefa any amin'ny trano fanatobiana entana amin'ny alàlan'ny forklift.Ny manipulator truss dia mahatsapa ny fitantanana fampandehanana manan-tsaina, izay afaka mampihena be ny hamafin'ny asa ary miaro tsara ny entana amin'ny fotoana iray ihany.Izy io koa dia manana ireto asa manaraka ireto: ny fisorohana ny vovoka, ny hamandoana, ny masoandro, ny fisorohana ny fitafy mandritra ny fitaterana.Noho izany, dia be mpampiasa amin'ny orinasa famokarana maro toy ny simika, zava-pisotro, sakafo, labiera, plastika ho azy stacking isan-karazany ny vokatra fonosana toy ny baoritra, kitapo, kapoaka, labiera boaty, tavoahangy sy ny sisa.
1. indostrian'ny kojakoja fiara
2. Indostria sakafo
3. indostrian'ny logistika
4. Fanodinana sy famokarana
5. Indostria sigara sy toaka
6. Indostria fanodinana hazo
7. indostrian'ny fanodinana fitaovana milina
Manipulator truss mandeha ho azy
Y axis (m/s)
Z axis (m/s)
Fahamarinana fametrahana miverimberina (mm)
Lubrication mifantoka na mahaleo tena
Haingana haingana (㎡/s)
teo aloha: Multiaxial Manipulator
Manaraka: Wire Rope Manipulator